7 Qaab Oo Jaceylka La Isugu Bandhigo - Daryeel Magazine
7 Qaab Oo Jaceylka La Isugu Bandhigo
Runtii waa jiraan habab badan oo jaceylkaaga aad ku dareensiin karto lamaanahaga aad jaceyl wadaaga tihiin si jaceylkiinu usii adkaado. Maanta waxa aan halkan idiin ku soo bandhigayaa habab muhiiim ah, si lamaanahaaga joogto kugu soo xiiso/xiisto, aad unoqotaan lamaane isku xiran.
-Maantay aad baad uqurxoontahay, sideen ku ogaaday? Maxaa yeelay daqiiqad weliba aad baad igu qurxoontahay.
-Dadka waxey jeceylyihiin iney noqdaan qoraxda si aay u nuuraan sida qoraxda, balse anigu waxaan doonayaa inaan noqdo dayaxa si aan kuugu ifiyo xiliyada aad kujirto mugdiga, qoraxduna aaysan muuqan xiligaas.
-Qeyb walbo oo jirkeyga ka mid ah adiga ayey kuu baahantahay oo aay ku tabeysaa, waxaan maleynayaa Allah in uu adi iikaa abuuray oo aan adunka ku leeyahay inaan Allah caabudo iyo inaan adi kuudhaxo.
-Waxa inoo dhaxeeyo bad weyn, buuro iyo weliba wadamo, sidaa aay tahay kama daalo in aan kuu soo gudbiyo jaceylkaan kuu qabo si aan umideeyo wadnayaasheena.
-Faraheyga Allah qeybo banaan ayuu uyeelay, waxaana buuxin karo farahaada si aan isku buuxino mar walbo aan gacmaha is haaysano.daryeelmagazine.com
-Mar weliba aan maqlo dhicitaanka teleefankeyga inaad adi tahay ayaan maleeyaa xattaa mararka qaar telefankeyga oo dhaceyn mooda inuu dhacayo oo aad isoo wacday, memoriga telefankeyga space “banana” ayuu leeyahay, laikin qalbigeyga adaa buuxiyay malahan meel banaan.
-Waxa aan jeclahay in aan noqdo ilmadaada, taasoo kasoo burqaneyso indhahaada quruxda badan, soo mareeyso dhabankaaga macaanta badan, kuna dhamaaneyso faruuryahaaga, balse madoonayo inaad noqoto ilmadeyda maxaa yeelay, mar weliba waa aay soo daadataa madoonayo mar walbo inaan kuwaayo aad iga dhamaato.
W/Q: Ibraahim Ali
Maxaa ka qaldan Jaceylka? Sida Loo Joojiyo Jaceylka Qof Aan Ku Jeclayn Qaab Jiifka Xilliga Uurka 3 Qaab Oo Loo Xaliyo Xamaasada Macaamiisha Xanaaqsan